Ungayengeza kanjani indawo esithombeni | Izindaba zamagajethi
Ama-Smartphones ayinqobile le mpi ngokudilika komhlaba phezu kwamakhamera wendabuko, kepha hhayi ngenxa yekhwalithi yawo, ikhwalithi eminyakeni yamuva, futhi ikakhulukazi ebangeni eliphezulu, elinokuncane noma okungenalutho lokufisa okunikezwa yilolu hlobo lwekhamera . Isizathu esiyinhloko kwaba induduzo.
Sihlala siphethe i-smartphone yethu, njalo. Futhi ngayo, siphatha ikhamera yazo zombili izithombe namavidiyo (ama-camcorder ngomunye umkhiqizo okuthe ngokufika kwama-smartphones wabona ukuwa kwemakethe yawo). Nge-smartphone yethu, asikwazi ukuthatha izithombe namavidiyo kuphela lapho sikhona, kodwa futhi kuyasivumela gcina indawo kusuka okufanayo.
Uma sithatha isithombe, sihambisana nefayela esilenzile, kugcinwa uchungechunge lwedatha, olubizwa nge-EXIF, olungagcini nje kuphela ukuvezwa, i-shutter namanye amanani, kepha futhi, uma sinekhamera yethu emisiwe ukuze qopha idatha yendawo, futhi uzigcine.
1 Yini esingayenza ngaleyo datha?
2 Faka indawo esithombeni ku-Mac
3 Faka indawo yesithombe ku-Windows
4 Faka indawo yesithombe ku-iPhone
5 Faka indawo yesithombe ku-Android
Yini esingayenza nge-eIngabe uyi-data?
Ngenxa yedatha yendawo, futhi ngokuya ngomphathi wezithombe esisebenzisayo, singakwazi thola ngokushesha futhi kalula lapho sithathe khona izithombe, ngaphandle kokuphendukela ekuguquleni izixhumanisi ezigcinwe endaweni ethile.
Njengoba iminyaka idlulile, amakhamera wekhwalithi, womabili anengqondo futhi engenazibuko bekulokhu kungezwa lo msebenzi, yize kwesinye isikhathi kuyisisekeli esihlukile okufanele sisithenge uma sifuna ukugcina izithombe zethu eduze nendawo ethize.
Uma ucabanga ukuthi isikhathi sesifikile sokuqala ukuhlukanisa izithombe zakho ngendawo, ikakhulukazi uma uthanda ukuhamba, sizokukhombisa ukuthi ungakwazi kanjani engeza indawo ezithombeni ezingenayo, ngoba azenzelwanga ngedivayisi enikeza lo msebenzi.
Faka indawo esithombeni ku-Mac
Ukuphatha izithombe zethu kwi-Mac, uma futhi sisebenzisa i-iPhone, uhlelo lokusebenza olungcono kakhulu esinalo yi-Fotos, uhlelo lokusebenza olutholakala ngokwendabuko ku-macOS. Uma sifuna ukufaka indawo yesithombe kusuka ku-Mac, kufanele senze lezi zinyathelo ezilandelayo.
Okokuqala, kufanele sivule uhlelo lokusebenza lwezithombe futhi khetha isithombe lapho esifuna ukwengeza khona lolu lwazi.
Lapho sesikhethe isithombe, kufanele siye kumenyu ephezulu yohlelo bese uchofoza ku- (i) to finyelela kuzakhiwo zesithombe. Lesi sigaba sikhombisa idatha ye-EXIF yesithombe, efaka nendawo uma itholakala.
Ebhokisini Nikeza indawo kufanele sibhale indawo lapho yenziwa khona, kulokhu kungu-Novelda. Ngokuzenzakalela, njengoba sibhala, izinketho ezahlukahlukene zizokhonjiswa esingakhetha kuzo.
Kanye, silitholile igama lendawo, kufanele sikwenze nje shaya ukungena. Okulandelayo, igama ledolobha esilikhethile lizoboniswa kanye nemephu yendawo okuyo.
Ukuhlola ukuthi uhlelo lokusebenza luye lwabona indawo entsha esiyingezile esithombeni, kufanele sisebenzise inketho Umtapo Wezithombe> Izindawo bese uthola isithombe endaweni esiyibekile.
Faka indawo yesithombe ku-Windows
Ngeshwa, futhi ngokungafani ne-macOS, Windows 10 ayisinikeli nganoma iyiphi indlela yokwengeza indawo ezithombeni zethu, okusiphoqa ukuthi sisebenzise izinhlelo zangaphandle. Uhlelo lokusebenza olunikeza imiphumela emihle lubizwa I-GeoPhoto - iGeotag, Imephu nombukiso wesilayidi. I-GeoPhoto uhlelo lokusebenza esingalulanda mahhala, futhi esingangeza ngalo indawo ezithombeni ezintathu.
Uma sifuna ukuqhubeka nokuyisebenzisa ukwengeza indawo ezithombeni eziningi, ngaphezu kokusebenzisa yonke eminye imisebenzi esisinikeza yona (thola izithombe emephini ngokususelwa endaweni yazo), kufanele iya ekuphumeni bese ukhokha ama-euro angu-5,99 ukuthi kubiza. Manje njengoba sesicacile ukuthi yiluphi uhlelo lokusebenza, esingangeza indawo ezithombeni zethu nge Windows 10, sikukhombisa izinyathelo okufanele uzilandele.
Lapho sesifake uhlelo lokusebenza ku-Windows Store, sikhetha isithombe noma izithombe esifuna ukwengeza indawo kuzo, chofoza kuzoinkinobho engakwesokudla bese siyazivula ngeGeoPhoto.
Okulandelayo, kufanele faka indawo yesithombe esikukhethile ebhokisini eliphezulu bese sikhetha kokunye esikunikezayo, okuyiyona ehambelana nendawo. Ekugcineni, kufanele sigcine indawo esithombeni, ngokusebenzisa inkinobho yokulondoloza etholakala engxenyeni engezansi yesithombe.
Ukuhlola ukuthi indawo igcinwe kahle yini, kufanele sivule kabusha uhlelo lokusebenza ngesithombe esisanda kusisebenzisa check ukuthi lokhu kuboniswa kanjani ebalazweni, sisebenzisa indawo esiyingezile.
Landa i-GeoPhoto esitolo se-Windows
Faka indawo yesithombe ku-iPhone
Ku-App Store sinezicelo ezahlukahlukene ezisivumela ukuthi sisebenze nedatha ye-EXIF yezithombe zethu, noma kunjalo akuzona zonke esivumela ukuthi sengeze indawo esithombeni kusuka kudivayisi.
Enye yezinketho ezinhle kakhulu ezitholakala ku-App Store esinikeza lo msebenzi ukuthi Isibukeli se-EXIF, uhlelo lokusebenza olunenani lama-euro angu-3,49, kepha futhi singathola inguqulo ye-Lite enenani elilinganiselwe lemisebenzi ukuze sikwazi ukuhlola yonke imisebenzi elisinikeza yona.
Uma sifuna ukufaka indawo esithombeni ngqo kusuka ku-iPhone ne-ExIF Viewer, kufanele senze i- izinyathelo ezilandelayo:
Lapho sesivule uhlelo, kufanele khetha isithombe esifuna ukwengeza kuyo indawo.
Okulandelayo, siya kwimenyu engezansi yesithombe bese uchofoza Hlela i-EXIF.
Ewindini elilandelayo, siya ezansi, ngaphakathi Indawo, chofoza engilazini yokukhulisa ukuze faka igama ledolobha lapho ikhona, sisebenzisa ushintsho futhi yilokho kuphela.
Faka indawo yesithombe ku-Android
Ku-Play sinesicelo sohlelo lwe-Photo EXIF ​​Editor, uhlelo lokusebenza, njengoba igama lalo likhombisa, lisivumela hlela idatha ye-EXIF yezithombe, ukuze ungeze idatha entsha noma ususe esevele ikhona. Ukwengeza indawo esithombeni ku-Android nge-Photo EXIF ​​Editor kufanele senze lezi zinyathelo:
Okokuqala, uma sesivule uhlelo lokusebenza, kufanele sichofoze Hlola bese uthola isithombe esifuna ukwengeza kuso idatha ye-EXIF.
Okulandelayo, umhleli uzovula lapho singashintsha khona yonke idatha esiyifunayo. Endabeni yethu, sichofoza ku- I-Geolocation.
Okulandelayo, kuzoboniswa ibalazwe lapho kufanele sithole khona ukuthi isithombe siphi. Uma iphini elinendawo litholakala, chofoza isithonjana sokuqinisekisa bese ulondoloza isithonjana esiboniswa endaweni efanayo.
Lapho sesisigcinile isithombe ngendawo, imininingwane ye-EXIF yesithombe izoboniswa futhi ngendawo esiyikhethile.
Photo Exif Umhleli Pro
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » Isithombe nomsindo » Isithombe » Ukungeza indawo esithombeni
IHonor yethula iHonor 9X Pro, iMagic Watch 2 neMagic Earbuds yaseSpain